Ahụike, nchekwa na gburugburu ebe obibi - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Omume azụmaahịa na mmepe akụ na ụba na-adigide bụ akụkụ nke DNA ebe achọtara XY Tower.
Taa nkwado na mmepe akụ na ụba bụ ụkpụrụ anyị bụ akụkụ dị mkpa nke ozi na ọrụ anyị ma bụrụ nke a na-ahazi site na ọrụ ọrụ anyị. Anyị kwenyere na enwere ike ịnweta nguzozi kwesịrị ekwesị n'etiti mmepe akụ na ụba na ebumnuche gburugburu ebe obibi. Ebumnuche na ebumnuche gburugburu ka edobere maka azụmaahịa anyị na-enyocha site na njikwa na nlekọta oge niile yana nyocha nke onwe na nke ndị ọzọ. XY Tower kwenyere ma kwalite na ndị ọrụ anyị niile na-ahụ maka ịgbaso ebumnuche gburugburu ebe obibi, ebumnuche na njikwa chọrọ. Anyị nyefere onwe anyị ịbụ onye isi na njikwa ọrụ HSE na ụlọ ọrụ ndị ọgbọ.
Ejiri XY Tower nye echiche na a na-egbochi ihe ọghọm niile na anyị na-etinye aka na iwu efu-ihe ọghọm. Iji mezuo nkwa a ma zụlite ọdịbendị nke na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ahụike na gburugburu ebe obibi anyị, a ga-agbaso ihe ndị a:
N’ilezi anya n’onwe anyi ime ihe kwekọrọ n’iwu na usoro iwu niile dị n’ihu.
Tinye usoro na usoro siri ike karị na ụlọ ọrụ anyị.
Ahụike nke ndị ọrụ bụ nchegbu kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ. XY Tower na-ahụ maka nchekwa na ebe ọrụ yana ndị ọrụ niile ga-anọ na akụrụngwa nchekwa na ụlọ ọrụ, ebe onye ọrụ ga-agbaso koodu mmepụta nchekwa.
Chebe gburugburu ebe obibi site na idobe obere mkpofu ihe ewepụtara site na mmemme dị iche iche, ma belata mmefu nke akụ.
Na-enyocha ebe ndị nwere ike maka mmelite HSE Management Sistemụ ma guzobe usoro ndị dị mkpa iji mejuputa mmezi dị otú ahụ.